David Harbour – Cast – Alpha Premium
No Sudden Move (2021) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ HBO Maxကနေ အသစ်ထွက်ရှိထားပြီး နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာ Steven Soderbergh ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ရိုက်ချက်တွေအတော်ကောင်းတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ် နာမည်ကြီး Cast တွေလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားလို့ အကြိုက်တွေ့ကြမှာပါ ထောင်ထဲက အခုမှထွက်လာတဲ့ နီဂရိုးလူမိုက် ကာ့တ်ဂိုရင်၊ အခြားဂိုဏ်းက လူမိုက်ဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်ရူဆို၊ ဂိုဏ်းလူမိုက် ချာလီ သူတို့၃ယောက်ကို မီးခံသေတ္တာထဲက စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ခိုးပေးဖို့ဆိုပြီး ငှားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ ဂိုဏ်းပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်ပက်သက်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ် အဲဒီစာရွက်စာတမ်းတွေနောက်ကိုလည်း အကုန်လုံးက လိုက်နေကြတဲ့အခါ ကာ့တ်နဲ့ ရော်နယ်တို့ သူတို့ကိုငှားခဲ့တဲ့လူကို သိအောင်ရှာဖွေကြတဲ့ အရူပ်တော်ပုံကို လှည့်ကွက်ပေါင်းစုံနဲ့ ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ HBO Maxကေန အသစ္ထြက္ရွိထားၿပီး နာမည္ႀကီးဒါ႐ိုက္တာ Steven Soderbergh ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ ႐ိုက္ခ်က္ေတြအေတာ္ေကာင္းတဲ့ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ နာမည္ႀကီး Cast ေတြလည္း ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားလို႔ အႀကိဳက္ေတြ႕ၾကမွာပါ ေထာင္ထဲက အခုမွထြက္လာတဲ့ နီဂ႐ိုးလူမိုက္ ကာ့တ္ဂိုရင္၊ အျခားဂိုဏ္းက လူမိုက္ျဖစ္တဲ့ ေရာ္နယ္႐ူဆို၊ ဂိုဏ္းလူမိုက္ ခ်ာလီ သူတို႔၃ေယာက္ကို မီးခံေသတၱာထဲက စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ခိုးေပးဖို႔ဆိုၿပီး ...
Black Mass Black Mass(2015)အညွှန်း ******************** (အလန်းစားကားမို့ 1080p5.1ch ပါပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်….) IMDb…7.0,,,,Rottten…73% ဘော်စတွန်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင် ဂျိမ်းစ်ဘော်လ်ဂျာကို မသိတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့… သူဟာဘော်စတွန်မြို့တောင်ပိုင်းမှာ ကြီးပြင်းတယ် သူ့မှာ ဘီလီဆိုတဲ့ညီတစ်ယောက်ရှိတယ် သူ့ကို ဘော်စတွန်မြို့တောင်ပိုင်းက လူတွေတော်တော်များများချစ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်ကလူဆိုး လူမိုက် လူပေ လူတေ သူ့ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံး တန်ဖိုးအထားဆုံးက သစ္စာတရားပဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ခင်ဗျားတို့တွေ ကိုယ့်ကို နာမည်ပြောင်လာခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးရန်ဖြစ်တတ်ကြတယ်မလား.. .ပြောင်ကြီးတို့ ခေါလေးတို့… ဒီဘော်လ်ဂျာဆိုတဲ့ဘဲလည်း သူ့ကိုနာမည်ပြောင်လာခေါ်ရင် မကြိုက်ဘူး… ဒါပေမဲ့ သူက ရန်တော့မဖြစ်ဘူး… သတ်တာ… ဇာတ်ကားက အရမ်းကြမ်းပါတယ်..ကလေးသူငယ်နဲ့ သွေးသံရဲရဲကြောက်တတ်တဲ့သူတွေမကြည့်သင့်ပါဘူး.. ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင် Johnny Depp နဲ့ Benedict Cumberbatch အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားလေတော့ ဒီကားကိုနင်းကန်ကြည့်သင့်ပါတယ်..စပွိုင်လာလုပ်လို့မကောင်းတဲ့ကားမျိုးမို့ ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေ…. ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး အစကနေအဆုံးထိ ဘာတွေဖြစ်မလဲ စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရတဲ့ကားမို့ လူမိုက်အကြမ်းစားကားတွေသဘောကျတဲ့သူတွေအဖို့လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း…
IMDB: 6.9/10 165,107 votes